EN877 Pipa-vy vy maloto, kapa vy tsy mifono vy, Fonosom-bary sy famonosam-by - Jipeng
Izahay manokana dia fantsom-pirazanana! Izahay dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanaparitahana!
EN877 Hubless Cast Iron Pipes
Couplings baja matevina miaraka amin'ny Gaskets
Fantsakan-tsiran-tsoavaly fanondrahana & Fangongo-by
Manarona sy manamboatra takelaka manhole
Natsangana tamin'ny taona 1998, ny orinasantsika dia manana tantara lava, izay ny vola miasa dia mihoatra ny 20 tapitrisa dolara amerikana. Nanana entana feno za-draharaha izahay mba hanompoana ny mpanjifa vahiny, anisan'izany ny mpikarakara ny tetikasa manokana mba handinika ireo antsipirihany momba ny vokatra, hitana ireo antontan-taratasy sns .. Azontsika atao ny manome ireo vokatra tsy vita ihany, fa afaka koa ny OEM izay manonta ny marika na marika mpanjifa vahiny. ihany koa dia afaka manao vokatra isan-karazany na manipy ampahany araka ny sarin-tsain'ny mpanjifa na ny santionany.
Ny mpanjifa dia afaka mankafy entana lafo vidy kokoa sy mahomby eto, ny iray amin'ireo tombotsoantsika dia ny fanangonana entana isan-karazany ho ao anaty boaty feno iray, ny mpanjifa sasany aza dia mila entana mihoatra ny 5 amin'ny fotoana iray. Ho mora kokoa amin'ny mpanjifantsika kokoa izany.
Ny fifehezana kalitao dia serivisy sarobidy iray ho an'ny mpanjifantsika.During ny famokarana na alohan'ny fandefasana, ny fanaraha-maso ny kalitao dia hidina any amin'ny orinasa mba hanafainganana ny fandefasana sy hanamarina ny tatitra momba ny kalitao sy ny voasoratra. Ny lahatsoratra tsy lavorary dia holavin'ny fanaraha-maso kalitao, hangataka ny mpanamboatra izahay hamerina na hanatsara ny kalitao mandra-pahamendrika azy ireo hihaona amin'ny mpanjifan'ny mpanjifa vahiny.
BS4622 Spigot sy Sipa Pipes
ASTM A888 Momba ny Tany Fittings
Fonony sy ravina famonosam-bolo miafina
Interceptor amin'ny gully grease
Raha mila vahaolana indostrialy ianao ... Vonona ho anao izahay
Manolotra vahaolana mahomby ho an'ny fandrosoana maharitra isika. Ny ekipa matihanina dia miasa mba hampitombo ny vokatra sy ny fahombiazan'ny vidiny eo amin'ny tsena